ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စိုးရိမ်လိုက်ပုံက...”
ကလေးကို အလိုက်သိလို့ အမှတ်ပေးလိုက်ပြီ...။
အလုပ်ပြုတ်ရင် ဝက်သားကင် မမှာသင့်မှန်း သူ ချင့်ချိန်တတ်တယ်..။
>>sin dan lar... မဒမ်ပေါကလည်း အလားတူပဲ ကောက်ချချပါတယ်။း-)
ရေးတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်ပါပဲ။ သူလည်း စိုးရိမ်ရှာမပေါ့။း)
တစ်ခါတစ်လေမှ ရောက်တာဖြစ်လို့ ပိုစ့်တွေအများကြီးဖတ်သွားတယ်။ အားလုံးကို ကွန်မန့်မရေးနိုင်တော့ဘူးဗျ။
ဂျူလီပိုစ့်ကို သဘောကျတယ်။ ပိုစ့်ထက် ကွန်မန့်တွေက ပိုကောင်းနေတယ်။ နောက်ဆုံးနားက အေးမြတ်မြတ်ကိုပြောတာ ပိုရှင်းပါတယ်။ ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်။ တစ်ချို့ ကွန်မန့်တွေက လမ်းလွှဲနေသလိုပဲ။
Double Thinker အကြောင်းလည်း ကြိုက်တာပါပဲ။
Hi ko Gyi Paw,
Do not think bad way. this time still haveajob means like win lottery. But employer they give u more jobs. This time is good time for employers, bad for workers.....
'ချစ်လေးကျောင်းပြီး၊ ပီအာရ၊ အလုပ်ရရင် ကိုကို ခဏနား' လို့ အစ်မကပြောတာ မူးတုန်းပြောတာ ကိုပေါရဲ့ ။ အဲဒါကိုတကယ်ယုံတော့ ကိုပေါမှာခံစားရမှာပေါ့။
>> sonata-cantata .... ဒီဝါးလုံးရှည်က ထိချက် ပြင်းတယ်။ မှန်နေတော့ လွတ်အောင် မရှောင်နိုင်ဘူး။
>> တားမြစ်ထားသော ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Double Thinker တွေအကြောင်းရေးပြီးတဲ့အခါ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ အချို့အခန်းလေးတွေကို ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါသေးတယ်။
>> Life is for Success .... အမှန်ပဲ။ ထွက်သွားတဲ့ လူတွေရဲ့ အလုပ်ကို ကျန်တဲ့သူတွေက တာဝန်ခွဲဝေယူကြရတာပေါ့။
>> KL ဘယ်သူပါလိမ့်... ဒါ အကြောင်းသိပဲ ဖြစ်ရမယ်။း-)
အဟား.. သမီးလေးက အဖေတူပဲ.. အစားပုပ်လေး..
အလုပ်မပြုတ်တာ သတင်းကောင်းပါ ကိုပေါရေ....
အိမ်မှာ နေရတာ ပျင်းစရာကြီးပါ... တပတ် နှစ်ပတ်ထက် ပိုမနေနိုင်ပါဘူး...
ကိုပေါ သမီးလေးက သိတတ်လိုက်ထှာ...။ ဒီပုံအတိုင်းဆို ကုတ်နဲ့ ကော်ထုတ်တောင် ကိုပေါ အလုပ်က ထွက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး..။ ထွက်မယ် ကြံတိုင်း ဘီးချန်ဟိန်းက ၀က်သကင်ကိုပဲ မြင်ယောင်လိုက်ပါပေါ့...။
တဖက်က ရုံးဆင်းလာမယ့် မဒမ်
(အဲဒါဆို ချစ်က အလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်) မရှင်းလို့မေးကြည့်တာပါ။
Ko Boyz ပြောတာလက်ခံတယ်။
ထွက်မယ်လုပ်တိုင်း သမီးလေး မျက်နှာမြင်ယောင်လိုက်နဲ့
အို အသင်လောက..သင်သည်ကျွန်ပ်အား ညျာတာမှူမရှိပါချေ။ (ကိုပေါကိုယ်စား)
မိန်းမပြောသမျှ အယုံလွယ်သော ကိုပေါဟု ကောက်ချက်ဆွဲသွားသည်။
(မှတ်ချက်။ Australia နဲ့ America လာရင် သမီးကြိုက်တဲ့ Bee Cheng Hiang က ဝက်သားကင်တွေ မသယ်လာဖို့ ကြော်ငြာထိုးပါရစေ။ လေဆိပ်တွေမှာ အသိမ်းခံရတဲ့အပြင်၊ ဒဏ်ငွေချခံရလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးလိုပါတယ်။)
အလုပ်လုပ်နေသူတွေက အလုပ်မပြုတ်ပါစေနဲ့ဆုတောင်းတယ်။ အလုပ်မရသေးသူများက အလုပ်မြန်မြန်ရပါစေ ဆုတောင်းကြတယ်...ကိုပေါ ကျတော့ တမျိုးပါလား။
ဟား.. ဟား..... စာအိမ်
ကိုပေါကြီး အိမ်လာလည်ဦး.. ၀က်သားကင်အချိုပါ ၀ယ်ခဲ့။ ဟီဒ.......... ဟီး
ဒီလောက် သိတတ်တဲ့ သမီးလေး..၀က်သားကင် နေ့တိုင်း ကျွေးသင့်တယ်။ (သမီးဖက်က ရှေ့နေ လိုက်သွားသည်)
ပြုတ်ချင်ပြုတ်ကွာလို့ တွေးတဲ့သူတွေ မပြုတ်ဘူး ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလို တွေးနေတာ အခုထက်ထိ မပါသေးတဲ့ အပြင် ပရော့ဂျက် အသစ်တောင် ထပ်ရလိုက်သေးတယ်။ :D
Congratulations to haveagreat, well-behaved daughter ...!!
But I wonder why you want to quit from job ....
Now, the prices are going up and job hunting also is becoming more difficult ...in Singapore ...
Anyway, I feel happy for your daughter .. she is so good ... so intelligent ...
And I wish to treat her what she wishes to have if I get chance to treat....
I am now living in Bedok and working at Eunos asaSoftware Engineer.
Wishing you and your family all the best .
ကိုပေါသမီးလေးက သိတတ်လိုက်တာ ။ တော်လည်းတော်တယ် ။ ရုံးဆင်းချိန်ကိုမှန်းပြီးကွက်တိဆက်တာ ။ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ။ အလုပ်မပြုတ်တော့ ကောင်းတာပေါ့ ။ အလုပ်မရှိဘဲနေရတဲ့ဘဝလောက်ပျင်းဖို့ကောင်းတာမရှိဘူး ။
>> မုန်းစရာ … မဒမ်ပေါက ပိုအစားပုပ်တာခင်ည။ ဟာ… အိမ်မှာနေရတာ မပျင်းပါဘူး။ ပိုက်ဆံသာ လုံလုံလောက်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင် အခုကတည်းက အနားယူလိုက်ချင်ပါရဲ့။
>> Ko Boyz … ကိုဘွိုင်းဇ်ရယ်…အဲသည်လို သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးတွေ အထပ်ထပ် ချည်နှောင်တာကြောင့် ကျွန်ုပ်မှာလည်း တရားဓမ္မ၌ မွေ့လျော်ချင်သော်လည်းး တောမထွက်နိုင်ဘဲ ရှိချေတာပေါ့။း-)
>> khin oo may ဒီတခါ ဦးစံရှားလုပ်တာ တော်၏။ မှန်၏။ ဂျူဝယ်အင်ကမ်း ၀မ်းကစ်ဒ်။ လောကကြီးက အမှန်ပင် ညှာတာထောက်ထားခြင်းမရှိပါပေ။
>> CMA …. မိန်းမစကား နားထောင်ငြား ကမ်းပါးကျောက်စောင်း ပုစွန်အောင်း၏…တဲ့ဗျ။
ကိစ္စမရှိ။ သြစတေးလျကို လာဖြစ်ရင် အဲသည်ကျမှ သမီးကို ၀က်ကောင်လုံးကင်ကျွေးတော့မယ်။
>> ကြည် … ဟုတ်တယ်။ ကျနော့်မှာ အလုပ်လုပ်ရမှာကို အချိန်မှားပြီး ငြီးငွေ့မိသလို ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။
>> သက်ပိုင်သူ … အံမယ်လေး…ချစ်စရာလေးတဲ့။ မဒမ်ပေါဆိုရင် ကျောင်းဆိုတဲ့ အသံကို ကြားတောင် မကြားချင်တော့ဘူးတဲ့။ စာလုပ်ရမှာ ပျင်းလို့။
>> Moe Cho Thinn …. သမီးကိုတော့ အိမ်မှာအတူနေတဲ့ သူ့အဖွားက ၀ယ်ကျွေးမကျွေးမသိ။ အဖေလုပ်သူကတော့ နေ့တိုင်းလိုလို ၀က်သားဟင်းနဲ့ ထမင်းစားမိတယ်။ (ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှေ့နေပြန်လိုက်ထားရတာ။) သမီးကလည်း သူ့ရပိုင်ခွင့်တွေတော့ သူသိပြီး ကောင်းစွာလည်း အသုံးချလေ့ရှိပါတယ်။
Zephyr …. မှန်ပါတယ်။ ယခု ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ကတော့ မထွက်သင့်ပါဘူး။ ကျနော်လည်း ခဏတဖြုတ်လောက် နားချင်တာပါ။ တောက်လျှောက်တော့ မနားနိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ…တိုတို ပထမဆုပေါက်ရင်တော့ အမြဲတမ်း နားပြီဗျိုး။
သမီးကတော့….လိမ္မာပါတယ်။ စူပါမားကက်တွေက အရုပ်တွေကို ခဏလောက် ပွေ့ဖက်ကြည့်လိုက်ရရင် သူက ကျေနပ်တယ်။ အတင်းအကြပ်မပူဆာဘူး။ သမီးက အရုပ်တွေဘာတွေ ၀ယ်ခိုင်းရင် ၀ယ်မပေးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကျနော်ကလည်း (အပြောင်အပြက်) ငိုပြရ်တယ်ဗျ။ “အံမယ်လေး…ဒီလိုသာဖြင့် ငါ့ပိုက်ဆံတွေတော့ သွားပါပြီ။ မွဲပါပြီပေါ့…အီးဟီးဟီး”…ပေါ့။ သမီးကလည်း အဲဒါဆိုရင် ရယ်လိုက်ရတာနဲ့ သူ့မှာ ကျေနပ်သွားရော။
မိတ်ဆွေလည်း အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Thant …. အဲဒီအချိန်က သမီးကျောင်းဆင်းချိန်လည်း ဟုတ်တယ်လေ။ အလုပ်မရှိတဲ့ဘ၀မှာ ခဏလောက်တော့ နေကြည့်ချင်သား။ ၀င်ငွေမရှိမှာကို မပူရဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ။
အကြံကြီးတဲ့ကိုပေါ… သမီးလေးစိတ်ပူလဲပူချင်စရာ… အဖေအကြောင်းသိနေတာကို…
I Really Don't understand Why Some-Myanmar-People said that..." Nothing To do & boring during No-Work-Period ""...
If U don't have to worry about $$$ For-A-While, ALOT OF THINGS TO DO, LEARN & ENJOY IN SPORE.....lah.....During once-in Lifetime free-Period..?
Your VALUABLE- EDUCATED- ADULT- LIFE is not supposed to " STRUGGLE, SUFFER, TIRED, Etc...EveryDays in other people' Country....